Jaaliyada Qoraxay: Xariga Ugaas Duulane Waa Xad Gudub – Rasaasa News
Jaaliyada Qoraxay: Xariga Ugaas Duulane Waa Xad Gudub
Feb 16, 2012 Jaaliyada Qoraxay: Xariga Ugaas Duulane Waa Xad Gudub
15 Maalmood oo xidhiidh ah waxaa xabsi ku jiro Ugaas Maxamed Duulaane Ugaas Xaashi, oo ay da,adiisu tahay 80 jir. Waxaana si xoog leh u soo badanaya baaqyada cambaareynta ah ee ka dhanka ah xadhiga Ugaaska iyo odayada.
Kulan ay isugu timid Jaaliyadda Qoraxay ee dalka Koonfur Afrika magaalada Johannesburg, ayay ku soo bandhigtay dood ku saabsan sababta loo xidhay Ugaaska iyo sababta aan loo hor gayn cadaalada ee uu qol madow ugu jiro.
Xubin ka mid ah shirka Jaaliyada ayaa hadal miisaaman ku yidhi “Ma aha wax aan fahmi karno xadhiga Ugaaska oo mudo 15 maalmood ah xabsi ku jira maxkamad la,aan.” Xubin kale oo Jaaliyada ka mid ah oo ka hadlay shirka ayaa yidhi “hadiiba hogaankii dhaqanka ee aan siyaasad shaqo ku lahayn la xidhayo, siday suurto gal ku noqon kartaa in dadku ku dhiiradaan tagida degaanka Somalida Ethiopia.”
Waxay Jaaliyada Qoraxay sheegtay in talaabooyinka noocan ah ay dhaawacayaan kalsoonida qurba-joogta degaanka Somalida Ethiopia ay ku qabeen maamulka, taasina ay wax u dhimi karto nabada curdanka ah, maalgashigii iyo waxtarkii ay Jaaliyaadku lahaayeen.
Waxa Jaaliyadu sheegtay in Ugaasku waligii ka shaqayn jiray nabadda, kana qayb qaadan wax siyaasad ah iyo hawlgal hubeysan midna. Jaaliyadu waxay sheegtay in Ugaaska iyo dadkiisuba ay taageereen nabada soona dhaweeyey heshiika dhex maray dawlada iyo mucaaradka. Laakiin waxaa nasiib daro weyn ah in talaabooyin dhaawacaya nabada degaanka ay ku kacayso dawlada degaanka Somalida Ethiopia xiliyadan dambe.
Jaaliyadu waxay aaminsan tahay in xariga Ugaaska laga leeyahay ujeedooyin dahsoon oo aan caafimaad qabin, waxayna ku baaqaysaa in si deg deg ah Ugaaska iyo odayaasha kale xoriyadooda loogu soo celiyo.
Waxaa haatan booqasho ku jooga degaanka Somalida Ethiopia, Jaaliyadaha reer Qoraxay ee qaarada Yurub, kuwaas oo xadhiga Ugaasyada ee laga horgeeyey uu bahdilaad iyo sumcad dil ku yahay.
Jwxo-shiil: Cidii I Cayda Degmadeena Adeer ha Cayminina!
Dhabcaal Ina-Dhuubo oo Been Dhiibay!